के तपाई पनि रातको खाना ढिलो खाने गर्नुभएको छ ? « Sansar News
के तपाई पनि रातको खाना ढिलो खाने गर्नुभएको छ ?
५ आश्विन २०७८, मंगलवार १४:२१
कतिपय मानिसहरु रातिको खाना ढिलो गरी खान्छन् । केहीले १० देखि ११ बजे त केहीले १२ बजेपनि खाने गरेको पाइन्छ । तर, स्वास्थ्यविज्ञहरु राति ढिलोगरी खाना खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने बताउँछन् ।
यो मामलामा स्वास्थ्यविज्ञ भन्छन्– यदि ढिलो गरी खाना खाने गर्नुभएको छ भने तपाईले खानाले होइन विमारले पेट भरिरहनु भएको छ । विज्ञका अनुसार खाना रातिको ७ देखि ८ बजेभित्रमा खाइसक्नुपर्छ । सास्त्रमा पनि रातिको खाना यहि समयमा खानुपर्ने बताइएको छ । यदि तपाई रातको खना ७ देखि ८ बजेभित्रमा खानेगर्नुभएको छ भने यो सबैभन्दा राम्रो हुनेछ ।
हामी नेपालीहरुको घरमा प्राय बिहानको १० बजे खाना खाइसकेका हुन्छौं । बिहानको खाना खाइसकेपछि लामो समय विभिन्न कामममा सक्रिय रहने हुनाले दिनको खाना सहजरुपमा पाचन हुन्छ । तर, रातमा खाना पनि ढिलो खाने तथा शरिर पनि सक्रिय नहुने हुनाले पाचन प्रक्रियामापनि समस्या हुन्छ । रात होस् या दिन खानाको पाचन प्रक्रियाका लागि तीनघण्टा भन्दा बढी समय आवस्यक हुन्छ । तर कतिपय मानिसहरुको बानी रातिको खाना खाएपछि सुतिहाल्ने हुन्छ ।
त्यसैले राति ढिलो गरी खाना खाने र छिटो सुत्ने गर्नाले पेट सम्बन्धी समस्या आउछ । साथै ढिलो खाना खाँदा त्यसले मुटुलाइ पनि असर गर्ने बताइन्छ ।
रातिको समयमा छिटो खाना खाँदा निद्रा राम्रो लाग्दछ । रातको समयमा खाना खाँदा दिउँसो भन्दा कम खानु राम्रो हुन्छ । यदि तपाई रातिको समयमा ७ बजे खाना खानुुुहुन्छ भने त्यसको २–३ घण्टापछि एक गिलास दूध पनि पिउन सक्नुहुन्छ ।
घरदैलो अभियानमार्फत दुई हजार बालबालिकाको आँखा परीक्षण
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा ११ हजार १३५ जनाको मृत्यु,…
मुटु स्वस्थ राख्न यी खानेकुरा हुन्छ विशेष फाइदाजनक
तीन हप्तामा १०० जना सेतो पुतलीका बिरामी, डा.…